APET PETG CPET Sheet Extrusion Line - China APET PETG CPET Sheet Extrusion Line mpamatsy, Factory –Jwell
Ity dia iray amin'ireo laharam-pamokarana mandroso indrindra miaraka amin'ny haitao matotra sy ny fitoniana any Shina. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany dia mihoatra ny 30% ny fahombiazany amin'ny ankapobeny. Ity tsipika ity dia mety ihany koa ho an'ny PS, PP, PE ihany koa.
CPET dia karazana PET novaina, miaraka amin'ny fanoherana tsara ny mari-pana avo lenta, mazàna ampiasaina amin'ny fonosana amin'ny lafaoro microwave.
PET Stereoscopic Optical Sheet Sheet: mety ho fonosana ambony indrindra izy io ho an'ny kosmetika, fanafody, paraky sy alikaola ary ny entana mahazatra toy ny stationery, dokam-barotra, afisy ary kara-panoratra isan-karazany.